भारतीय बलियुड उद्योग मा धेरै नै अभिनेता र अभिनेत्री हरु छन् जुन उत्कृष्ट अभिनय को कारण बलियुड मा टिकेका छन् र संसार भर तारिफ को पात्र बनेका छन् । विश्वमै सफल मानिएको बलिउडमा अभिनेता र अभिनेत्री हरुको कुनै कमि छैन सबै उत्तिकै प्रतिभाशाली छन् तर केहि अबिनेत्री हरु अभिनय क्ष्मता भन्दा पनि उनीहरुले देखाउने बोल्ड फोटो र भिडियो हरुले मात्र बलिउडमा टिक्न सफल भएका छन् !
पर्दामा देखिने उनीहरुको बोल्ड सिनका कारण उनीहरुको फिलम् ले मार्केट तताएको हुन्छ !
बलिउडमा प्रवेश गर्नुअघि ‘पो र्न स्टार’ रहेकी उनको परिचय नै खराब थियो । उनलाई आइटम गीतमा धेरै काम गराइयो र मुख्य भूमिकामा कम । उनलाई बलिउडमा फिल्म चलाउनकै लागि मात्र प्रयोग गरिएको छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमवार, पुस २७, २०७७ २१:११:४८